Giriigga oo sheegay war muujinaya inay Soomaalidu iska qarxisey fursad ay ku qabtey Turkiga | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Giriigga oo sheegay war muujinaya inay Soomaalidu iska qarxisey fursad ay ku...
Giriigga oo sheegay war muujinaya inay Soomaalidu iska qarxisey fursad ay ku qabtey Turkiga
(Athens) 11 Dis 2020 – Dowladda Giriigga ayaa Turkiga ku eedeeysay inuu Soomaalida siiyo fiise sahlan kaddibna marka ay yimaadaan uu farta ugu fiiqo inay Giriigga aadaan si ay Yurub uga sii gudbaan.
Athens oo muddo dheer Ankara ku eedeeynaysey inay hub ahaan u adeegsanayso arrimaha qaxootiga si ay cadaadis u saarto Midowga Yurub oo ay ku eedeeysay inaysan taageero ku filan siinnin si ay ula xaasho ilaa 4 milyan oo qaxooti ah.
Turkiga ayaan eeddan oo qayb ahaan been abuur u badan aan weli ka hadlin, balse waxaa run ah inuu Turkigu Soomaalida siiyo deeqo waxbarasho oo aanay ka faa’iidaysanin ujeedkiisuna ma aha inay dadku sii tahriibaan, lamase oga cidda Giriigga uga sheekeysay, waloow uu Wasiirku leeyahay waa uun Soomaalida waxa warkan noo sheegay.
Soomaalida ayaa caan ku ah inay isla iyadu iska qarxiso fursad kasta oo soo marta.
Previous articleKA DHIG: Millaterigii xilka boobay waxay doorasho madax bannaan qabteen 1973-kii, kaddib maxaa dhici kari lahaa?
Next article”Gaarigii ay dhex fadhiyeen ayuu feer ku jebiyey kaddibna waa cayrsadey” – Booliiska Edmonton oo qabtay nin weerar ku qaaday gabdho Soomaali ah